याद गर्नुहाेस् ! हिंस्रक बनाउँदै पब्जी गेमले बालबालिकालाई - ज्ञानविज्ञान
याद गर्नुहाेस् ! हिंस्रक बनाउँदै पब्जी गेमले बालबालिकालाई
अहिले कम्प्युटर वा मोबाइलमा एउटा खेल निकै लोकप्रिय बनिरहेको छ । प्लेयर्स अननोन्स ब्याटलग्राउण्ड अर्थात् पब्जी ।यो गेममा खेलाडीहरु एउटा टापुमा हुन्छन् । एउटा टिममा अधिकतम ४ जना ‘लडाकु’ हुन्छन् र टापुमा रहेका बाँकी ९६ जना लडाकुहरुलाई मार्नुपर्ने हुन्छ ।
टापुमा रहेका सबै ‘शत्रु’लाई मार्न सकेमा त्यो खेलाडी विजयी हुन्छ ।यो खेलमा बन्दुकबाट गोली हान्ने, बम हान्ने र आगोको लप्का फाल्ने काम गर्नुपर्छ । अनि सबैलाई मारेर आफू विजयी बन्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय विशाललाई एउटा समस्या देखा पर्यो । विद्यालय गयो कि आधा वा एक घण्टामा दिसा लाग्ने । तर विद्यालय गएन र घरमै मोबाइल खेलेर बस्यो भने सबै ठीक हुने ।
समस्या बढ्दै गएपछि परिवारले राम्रो अस्पतालहरुमा लगेर जचाए । तर डाक्टरले केही रोग नभएको भन्दै फिर्ता पठाइदिए । हैरान भएपछि ती अभिभावक मनोचिकित्सक बासु आचार्यकोमा पुगे ।
केही दिनअघि मात्रै तीनकुनेकी सन्ध्या पौडेल पनि आफ्ना अभिभावकसँग आचार्यको क्लिनिकमा आइपुगिन् । उनको समस्या पनि उस्तै थियो । मोबाइलमा गेम खेल्न पाए सबै ठीक हुने ।
खेल नखेल भन्यो भने बुवा वा आमालाई थुक्ने, गाली गर्ने, अगाडि जे देख्यो त्यसैले हान्ने गर्न थालिन् । हैरान भएपछि अभिभावकले उनलाई उपचारका लागि त्यहाँ ल्याएका थिए ।यी घटनाहरुले के बुझाउँदैछ भने बालबालिकाहरु गेमका कारण हिंस्रक बन्दै छन् र उनीहरुमा मानसिक समस्या पनि बढ्दै गएको छ ।
मनोविश्लेषक आचार्यका अनुसार पब्जी जस्तो हतियार र हत्या गर्ने खेलले बालबालिकालाई हिंस्रक, उदण्ड र आक्रामक बनाइरहेको छ । यो गेम खेल्नेहरु दिनानुदिन संवेदनाहीन बन्दै छन् । मानिसहरु मर्दा वा मारिँदा पनि उनीहरुमा खासै फरक पर्दैन र पार्दैन ।
जब ती बालबालिकाहरु १४ वर्ष कट्न थाल्छन्, त्यसपछि उनीहरु उदण्ड र हिंस्रक बन्न थाल्छन् । त्यसपछि घरका सदस्यलाई पनि जे भेट्यो त्यसैले आक्रमण गर्न सक्ने अवस्थामा पनि पुग्छन् । जब यसको एडिक्सन सुरु हुन्छ, त्यसपछि बालबालिका ‘आउट अफ कन्ट्रोल’ हुन थाल्छन् ।
बालबालिकालाई पब्जी वा पब्जीजस्ता खेलको लत बस्न नदिन परिवारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । बालबालिकाले मोबाइल वा कम्प्युटरमा के खेल खेल्दैछन्, के गर्दैछन् भनेर अभिभावक सचेत हुनुपर्छ । यदि बालबालिका यसको लतमा लागिसकेका छन् भने बिस्तारै उनीहरुलाई त्यस खेलबाट बाहिर ल्याउनपर्दछ । उनीहरुलाई नखेल मात्रै भनियो र कुनै कुरा खेल्नै दिइएन भने उनीहरु झनै हिंस्रक बन्न सक्छन् ।
त्यसकारण उनीहरुलाई अर्को विकल्प (खेल वा अन्य मनोरञ्जन) दिएर बिस्तारै यो लत हटाउन सकिन्छ ।त्यसकारण अभिभावकले अहिले नै आफ्ना बालबालिका के गरिरहेका छन् वा के गरिरहेका छन् भनेर निगरानी बढाउनुपर्छ । मोबाइलमा यस्ता हिंस्रक खेलको लत बसिसकेको हो भने बिस्तारै यसबाट छुट्कारा दिलाउनुपर्छ ।
पब्जी गेमको कुलतः स्वास्थ्यमा कसरी हानी गर्छ ?
अहिले धेरैको मुखमा झुन्डिने शब्द हो, पब्जी । फुर्सदमा सम्झने गेम हो, पब्जी । स्मार्टफोन भेट्नसाथ खोजिने गेम हो, पब्जी । पब्जी गेम भनेपछि कामधन्दा छाड्नेहरु पनि छन् । लेखपढ गर्न छाड्ने पनि छन् । यस्तो लाग्छ, उनीहरुको सपना-विपना पब्जी नै हो ।
खेलका आफ्नै सर्त र सीमा हुन्छन् । खेलको आफ्नै महत्व हुन्छ । खासगरी आउटडोर गेमहरुले शारीरिक, मानसिक विकासमा ठूलो सघाउँ पुर्‍याउँछ । त्यसका अरुपनि थुप्रै फाइदा छन् । जस्तो कि, प्रतिस्पर्धाको भावना विकास हुन्छ । नेतृत्व क्षमता विकास हुन्छ । एकता एवं सामाजिक भावना निर्माण हुन्छ ।
यद्यपी अहिले भर्चुअल गेमको जमना छ । घरभित्र अझ एउटै कोठामा कोचिएर भर्चुअल गेममा रमाउनेको संख्या बढ्दो छ । यी भर्चुअल गेमहरु सर्वथा गलत भन्ने होइन । भर्चुअल गेमले पनि मानसिक तनावबाट मुक्त गराउन सक्छ । मनोरञ्जन दिन्छ । कतिपय चलाखीपूर्ण निर्णय गर्ने क्षमताको विकास गर्छ ।
तर, कुनैपनि कुरामा आवश्यक्ताभन्दा बढी आशक्ति हुनु भनेको कुलत लाग्नु हो । कुलतले मानसिक, शारीरिक, सामाजिक विकासमा अवरोध पुर्‍याउँछ । महत्वपूर्ण समय नष्ट त गरेको छ नै ।करियर बनाउने उमेरमा युवाहरु पब्जी खेलेर समय बर्बाद गरिरहेका छन् ।
पब्जीको साइड इफेक्ट
एकातिर पब्जी खेलको लोकप्रियता चुलिदो छ अर्कोतिर यसले मानसिक एवं शारीरिक समस्या पनि नित्याउँदैछ । अहिले पब्जीको कारण युवाहरुमा के कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखापर्छ भनेर खोजी हुन थालेको छ । पब्जी खासमा एक मल्टीप्लेयर वा सामूहिक गेम हो, अर्थात एकसाथ केही खेलाडीले यसमा भाग लिन्छन् ।
यो गेम खेल्दै जाँदा युवाहरु यति निर्लिप्त हुने गरेका छन् कि उनीहरुले आफ्नो पढाई, कामधन्दा, करियर पनि सोच्न छाडेका छन् । साथै एकै स्थानमा घण्टौ बसेर गेम खेलिरहँदा स्वास्थ्यमा गंभीर समस्या पनि देखापर्दैछ ।
पब्जीले स्वास्थ्य खराब गरेपछि
पब्जीको कारण युवाहरुको स्वास्थ्यमा खराबी आएपछि यस खेलका निर्माताहरुले नै यसको रोकथामको उपाय खोजेका छन् । उनीहरुले यसका लागि ६ घण्टाको समय निर्धारित गरिदिएका छन् ।
यसको अर्थ अब कुनैपनि खेलाडीले ६ घण्टाभन्दा बढी समय गेम खेल्न सक्नेछैनन् ।६ घण्टा पनि हेल्थ नोटिफिकेशन आउनेछ । त्यसपछि भने गेम स्वत् बन्द हुनेछ ।
पब्जीबाट असर भोगेकाहरुको अनुभव
एक २४ बषिर्य युवाले पब्जी खेलिरहँदा आफ्नो स्वास्थ्यमा कसरी त्यसले असर पुर्‍यायो भन्ने कुरा शेयर गरेका छन् । उनका अनुसार पब्जीले त्यस्तो भयानक स्वास्थ्य समस्या त पैदा गराएको छैन । यद्यपी उनको स्वास्थ्य स्थिती भने सामान्य छैन, जो हुनुपथ्र्यो ।
खेल आक्रमक भएकाले त्यसको मानसिक प्रभाव आफुमा पर्ने उनले बताए । साथै खेल हिंस्रक भएकाले आफुमा पनि त्यही किसिमको प्रवृत्ति क्रमस विकास हुँदै गएको उनले महसुष गरेका छन् ।
लामो समयसम्म मोवाइल खेलेर एकै स्थानमा बसिरहँदा आँखामा समस्या भएको थियो । साथसाथै उनको गर्दन र हातमा पनि समस्या देखियो । यसको अर्को समस्या भनेको अनिद्रा हो । गेमका तल्लिन भएयता उनको निद्रा भंग भएको छ । निद्रा नियमित र गहिरो छैन ।
अर्को एक युवा पनि दैनिक ६ देखि ७ घण्टासम्म पब्जी खेलिरहँदा त्यसले आफ्नो स्वास्थ्य खराब गरेको सुनाउँछन् । उनलाई अहिले टाउको दुख्ने समस्या भएको छ । साथै आँखा पनि कमजोर भएको उनले महसुष गरेका छन् ।
गेम खेल्ने चक्करमा उनले आफ्नो दैनिक काम, पढाई पनि भुलेका छन् । साथीभाईसँग हेलमेल हुने, परिवारसँग रमाउने समय पनि कटौती भएको छ । अहिले उनलाई निरन्तर टाउको दुख्ने समस्या छ । त्यही कारण उनलाई मोवाइल गेम खेल्न झर्को लाग्न थालेको छ ।
पब्जी एक समस्या
अहिले बच्चाहरु विद्यालयबाट फर्केपछि मोवाइलमा पब्जी खेल्न थाल्छन् । वयस्कहरु पनि अफिसबाट फर्किएपछि पब्जीमै रामाउन थाल्छन् । यसले गर्दा उनीहरुको शारीरिक सक्रियता पुरै घटेको छ । एकै ठाउँ कोचिएर घण्टौ बिताइरहेका छन् ।
यस गेमको चक्करमा परेपछि मान्छेको सुत्ने तालिका गडबड भएको छ । अपर्यात निद्रा, मोटोपन, उच्च रक्तचाप, हृदयरोग जस्ता समस्यालाई यसले जन्म दिएको छ ।
पब्जी खेल्नेहरुलाई ढाँडको समस्या देखिएको छ । उनीहरुको आँखामा पनि समस्या देखिएको छ । पब्जीको एडिक्सनले मान्छेको दिनचर्या विथोलिएको छ ।
उनीहरुको खाने, सुत्ने तालिका प्रभावित भएको छ । यसले शारीरिक गतिविधिलाई पुरै निस्क्रिय बनाइदिएको छ । सामाजिक सम्पर्क पनि टुटाइदिएको छ ।
पब्जी अहिले धेरै अभिभावकको लागि टाउको दुखाईको विषय भएको छ । यो भर्चुअल गेम ठिक त्यस्तै हो, जो लागु औषधको लत हुनेगर्छ ।
पब्जीको लतमा फसेकाहरुलाई पारिवारिक जीवनमा फर्काउनुपर्छ । उनीहरुलाई यो गेमबाट मुक्त गराउनुपर्छ । यसका लागि अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीसँग अतिरिक्त समय दिनुपर्ने विज्ञहरुको राय छ ।
बच्चालाई एक्लो हुन नदिने वा गेम खेल्ने अनुकुलता नदिनु नै बुद्धिमता हुने उनीहरुले बताएका छन् ।
Don't Miss it अमृतीय गुण भएको बेलकाे यति धेरै फाइदै फाइदा
Up Next पनिर चिल्ली खान मन छ तर बनाउन आउँदैन ? यसो गर्नुहोस
दिमागमा आउने नकारात्मक साेचबाट कसरी बच्ने ? जान्रुहाेस्
हामी खुशी, सुखी र सफल जिवनकाे लागी भाैतारिरहेका हुन्छाैँ । तर ति सबै कुराहरू हामीले आफुभित्र प्राप्त गर्न सक्छाैँ ।…
गर्मी माैसममा यस्ता खानेकुरा खाँदा स्वास्थ्यलाई फाईदा हुन्छ ? जान्नुहाेस्
यस्ता रोगीले भटमासको कुनै पनि परिकार सेवन नगर्नुहाेस्
धेरै मानिस छन् दाद रोगको शिकार, छुमन्तर हुन्छ दाद यति राखे विचार
घरेलु उपचारका लागि पुरा पढ्नुहोला धेरैले आफ्नो छालामा चिलाउने ‘दाद’ आएको भन्छन् । त्यसलाई दाद भनिए पनि त्यो ‘फंगल इन्फेक्सन’…
कस्तो खानेकुरा गर्मीमा सही हुन्न ? जान्नुहोस
गर्मीमा प्राय खानेकुरा एकछिन राख्य भने पानी बिग्रेने हुन्छ । हामीले गर्मि मौसममा खानामा बिषेश ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ ।…
अंकुरित खाद्य स्वास्थ्यका लागि अमृत भोजन जानिराखाैँ
प्राकृतिक चिकित्सा एक यस्तो चिकित्सा विज्ञान हो, जसमा कुनै पनि औषधिको प्रयोगबिना रोगको उपचार गरिन्छ । यसमा आहारलाई नै औषधिको…
एकचाेटि पढाै भान्टाकाे औषधीय गुण ! धेरै राेग निवारणका सहायक उपाय भान्टा
भान्टा विश्वभरको भान्सामा प्रयोग हुने तरकारी हो । बहुगुणी भान्टा नेपालमा पनि सहजै उपलब्ध हुन्छ । यसलाई ऐगल्पान्ट, औवरजीन, मेलोनजेन,…
पेटको सम्बन्धी रोगहरुको उपचारका केहि घरेलु उपाय
अल्सर हुँदा दुखाई बढेर आउने, खाली पेट बस्न नसक्ने खायो कि पेट दुखिहाल्ने र कसै कसैलाई बान्ता हुने, खान मन…